Faroole oo Hargaysa Lagu soo Dhaweeyay, Kuna soo Wajahan Garowe | SAHAN ONLINE
Faroole oo Hargaysa Lagu soo Dhaweeyay, Kuna soo Wajahan Garowe
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed” Faroole” ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaaladda Hargaysa ee caasimadda somaliland , halkaasoo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Madaxweynihii hore, waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda somaliland,Cuqaal, Waxgarad, Ganacsato iyo siyaasiin ah. Ujeedada Faroole u tegay magaalada hargaysa ayaa la sheegayaa inay la xiriirto sidii u booqan lahaa qaraabada iyo eheladda qoyska AHN xaaskiisii hore Aamino Abiib, oo ku geeriyootay magaalada Garowe ee caasimada Puntland.
Wararku waxay intaas ku darayaan in maalmo kooban oo uu joogi doono magaalada Hargaysa, uu ku soo wajahan yahay magaaladda Garowe, halkaasi oo muddo Sanad iyo Bar uu ka maqnaa markii looga adkaaday doorashadii madaxtimo ee puntland 8 january 2014kii.
Madaxweyne Faroole, waa markii u horraysay muddo 23 sanno uu booqdo magaaladda Hargaysa, oo Waqtiyadii dowladii kacaanka uu ka shaqayn jiri, Iyadoo xiligii uu madaxweynaha dowladda puntland uu ka ahaa uu aad u wanaagsanaa xiriirka u dhexeeya puntland iyo Maamulka goonida isaga taagay ummada soomaaliyeed ee Somaliland.